Sida Loogu badalo Oneplus 2-kaaga mobile-ka Linux-ka ah oo leh Ubuntu Touch (fudud) | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | Android, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Aasaaska UBports, Aasaaska samafalka Jarmalka ee ka dambeeya mashruucan, ayaa sii wadaya inay wanaajiso khibrada una fududeyso dadka isticmaala ee doonaya inay ku rakibaan nidaamkaan mobilada qalliinka aaladooda Android. Caddaynta tani waa tan cusub Rakibida UBports Ubuntu Taabashada way sii daayeen. Gaar ahaan, way u fududaan doontaa kuwa haysta OnePlus 2, iyagoo awood u leh inay si tartiib tartiib ah ugu beddelaan kumbuyuutar Linux ah.
Waxaad horeyba u ogayd in Ubuntu Touch uu ahaa nidaam hawleed moobiil aad u rajo badan leh, isla markaana isku soo laabashadaas oo qof walba uu ka hadlayo ay imaan laheyd ugu dambeyntiina ay umuuqato inuu hilmaamay. Nasiib darrose, Canonical ayaa joojiyay mashruucan sannado ka hor, laakiin aasaaskani wuu la qabsaday oo wuu sii nooleeyay, sidoo kale wuxuu fududeeyay socdaalka macruufka ama Android.
Hadda waxaa jira UBports Installer cusub ama Ubuntu Touch Installer waxaad ku rakibi kartaa nidaamka hawlgalka gudaha qalab kasta oo la taageeray dadaal yar, adigoon ku wareegin inaad ku rakibto ROM-yada gacanta oo aad qatar u gasho haddii wax qaldamaan inta howshu socoto iyo inay waxtar yeelanayso maxaa yeelay si fiican uma garatid sida loo dhaqmo.
Tallaabadan waxaa si raaxo leh looga samayn karaa Windows PC-kaaga, macOS ama ka socda GNU / Linux. Xitaa uma baahnid nidaam gaar ah maadaama ay si fiican uga shaqeyneyso barnaamijyadan.
Tan iyo markii UBports Installer-ka 0.7.4-beta la sii daayay dhowr bilood ka hor, waxaa jiray isbadalo waaweyn iyo horumar. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa in lagu daro OnePlus 2 casriga ah u dhexeeya liiska la taageeray. Sidaa darteed, haddii aad leedahay mid ka mid ah moodooyinkaas oo aad rabto inaad ku siiso nolol labaad Linux, waxaad raaci kartaa tallaabooyinkan si aad ugu rakibto Ubuntu Touch si fudud.
Tan koowaad waa soo dejiso nooca ugu dambeeyay ee xasilloon ee la heli karo, oo ah 0.8.7 waqtiga qoritaanka maqaalkan. Si aad uga soo dejiso nooca ugu dambeeya halkaas, si fudud u raac talaabooyinkan:
Ka hel cinwaankan bogga rasmiga ah.
Hoose iyo dhagsii badhanka xirmada waxaad dooneysaa inaad kala soo baxdo UBports Installer, ama Windows, macOS ama Linux distro. Xaalada Linux, waxaad haysaa xirmooyinka DEB, Snap, ama xirmo caalami ah AppImage, hadba kii aad doorbido.
Markaad soo dejiso xirmada, waad awoodi kartaa rakibi xirmadan sidaad ula mid noqon lahayd xirmo kale oo ka mid ah astaamahaas. Tusaale ahaan:
Waad ku furi kartaa DEB-ga Gdebi si aad garaaf ahaan ugu rakibto ama aad u adeegsato maareeyaha xirmada khadka amarka.
Wixii AppImage ah, sii si ay u fuliso rukhsad iyo guji laba jeer guji.
Marka lagu rakibo qalabkaaga, waxa xiga waa inaad raacdaa kuwan tallaabooyinka kale:
Orod Rakibidda UBports.
Hadda, ku xir OnePlus 2 (off) kombuyuutarkaaga adoo adeegsanaya fiilada USB.
Qalabka rakibidda 'UBports', tuubada Xullo Qalabka gacanta.
Daaqada cusub ee kuu muuqata, dooro moobilkaaga aad ugu talagashay inaad ku rakibto Ubuntu Touch iyo inaad hada kuxirantahay OnePlus 2.
Hadda, shaashadda xigta, waxaad uga tagi kartaa xogta sida ay tahay ama beddeli kartaa kanaalka, taasi waa, OTA taas oo aad ku rakibayso ama aad version. Tusaale ahaan, OTA-15 ama nooc kasta oo cusub haddii aad doorbideyso.
Marka aad dhammeyso sameynta isbeddelada aad rabto, riix Ku rakib si loo rakibo nidaamka.
Waxay kuu soo direysaa fariin digniin ah, waa inaad Continue si loo sii wado
Waxay ku weydiin doontaa adiga password maamulaha nidaamka ee ay tahay inaad gasho si aad usii wado.
Guji OK in la raaco.
Haddaba, taabo badhanka awooda dhowr ilbiriqsi illaa aad ka aragto shaashad Bilow ah.
Waxaad arki doontaa in farriin ay ka muuqato shaashadda PC-gaaga oo ay tahay inaad sameyso in la aqbalo.
Haddii wax walboo sifiican udhaceen, waxaad arki doontaa sida shaashadaha kaladuwan uga muuqdaan midkaaga OnePlus 2 iyo rakibayaasha UBports. Uma baahnid inaad wax sameyso, kaliya in la sugo.
Kadib OnePlus 2-kaaga ayaa dib loo bilaabayaa iyo shaashadda rarka ee Ubuntu Touch.
Hadda waa inaad ku raaxeysataa Ubuntu Taabashadaada boosteejadaada ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo beddelo Oneplus 2-kaaga mobiil Linux ah oo leh Ubuntu Touch (fudud)
Waad salaaman tahay, waxaan ku rakibay rakibaadda sida kor ku xusan ee faahfaahinta ah One Plus 2 casriga ah oo ka socda laptop-ka oo wata Arch Linux isla markaana rakibidu waxay ahayd mid aad u fudud oo aad u dhakhso badan.
Waad ku mahadsan tahay maqaalka
PeerTube 3.1 wuxuu la yimid horumar transcoding, interface iyo in ka badan